सीकेले आफ्ना कमजोरी स्वीकारेर मूलधारमा आएका हुन्
(पृथकतावादी धारको नेतृत्व गर्दै आएका सीके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि देशको राजनीति तरंगित भएको छ । सीकेसँगको सम्झौतालाई लिएर सरकारको प्रशंसा भन्दा पनि बढी आलोचना भइरहेको छ । स्वयं नेकपाकै नेताहरूले यसका भाषा र विषयवस्तुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले राउतसंग गरेका सम्झौताका विषय किन विवादमा परिरहेका छन् । द्विअर्थी भाषा र विषयवस्तु राखेर किन सम्झौता गरियो ? यिनै यस्ता प्रश्नको वरिपरि रहेर हामीले राउतसँगको प्रारम्भिक वार्तामा सहभागी नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेपः सम्पादक)
० पृथकतावादी धारको नेतृत्व गरिरहेका सीके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । देश टुक्र्याउने राउतको अभियानलाई सरकारले वैधानिकता दियो भनेर आलोचना भइरहेको छ । किन यस्तो विवादग्रस्त सहमति गर्नु भएको तपाईंहरूले ?
–राजनीतिक पार्टीसँगको छलफल र सम्झौताहरू मूलधारमा ल्याउन गरिन्छ । विगतमा पनि मूलधार बाहिर रहेका दलहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन धेरै सहमति भएका छन् । माओवादीसँगै पनि विगतमा सरकारले सहमति गरेको थियो । त्यहीँ सहमतिकै आधारमा ऊ मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको थियो ।
० सीके राउतसंग वार्ताको सुरुवात कसरी भयो नि ?
–जहाँसम्म सीके राउतको कुरा छ, उहाँको दाजु जयकान्त सुरुमा हामीकहाँ वार्ता गर्नुप¥यो भनेर आउनु भएको थियो । वार्ताको आग्रह बोकेर उहाँ आए पनि सीके राउतको एजेन्डा राजनीतिक नभएर मुलुक विखण्डन गर्ने भएकाले हामीले वार्ता हुन नसक्ने जवाफ उहाँलाई दिएका थियौं । मुलुक विखण्डनको एजेन्डा छाडेमा भने वार्ता गर्न तयार रहेको कुरा पनि हामीले सँगसँगै बताएका थियौं । योबीचमा केही चरण उहाँका दाजुसँग हाम्रा अनौपचारिक संवादहरू भए । यी संवादका क्रममा उहाँले सीके राउत आफ्ना विखण्डनका एजेन्डा छाडेर संविधान मान्न तयार छ भन्नेखालका कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि हामीलाई लाग्यो–यसलाई अब अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो खबर पुगेपछि उहाँहरूले यसमा तदारुकता देखाउनु भयो । सबैको चासोपछि सीके राउत पृथकतावादी धार छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्न राजी भएकाले यसमा विवाद गरिराख्नुको म कुनै तुक देख्दिनँ ।
० तर, सरकार र राउतबीचको सम्झौतामा त तपाईंले भनेजस्तो प्रष्ट छैन । भाषा र विषयवस्तुले अलि फरक अर्थ लाग्छ नि ?
–होइन होइन । यो बिलकुल गलत हो । राज्यले पृथकतावादी एजेन्डा बोकेको कुनै पनि संगठनलाई तिमीहरूको एजेन्डामा हामी सहमत छौं भनेर भन्दैभन्दैन । त्यहाँ प्रयोग गरिएका शब्द र वाक्यांशलाई अनेक ढंगले व्याख्या गर्न सकिएला । तर मुलुकलाई नोक्सानी हुनेगरी सहमति भएका कुरा बिलकुल गलत हो । सरकार–राउतबीच भएको सम्झौता लेख्दा म थिइनँ । तर, पछि सरसर्ती ती बुँदाहरू मैले हेरेँ । आपत्तिजनक कुनै विषय देखिनँ ।
० जनताको अभिमतद्वारा मधेसका असन्तुष्टि हल गर्ने भन्ने पदावलिलाई लिएर सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो भन्ने अर्थ लगाइँदैछ । त्यो पदावलिलाई आमसर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ?
–हो, कतिपयले त्यो पदावलिलाई जनमत संग्रहकारुपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यो बिलकुलै गलत कुरा हो । अहिलेको ११ बुँदे सम्झौता मुलुकलाई नोक्सानी हुनेगरी कुनै सम्झौता भएको छैन । अन्य नियमित निर्वाचनको अर्थमा त्यो शब्द प्रयुक्त गरिएको हो । जनताको मत ल्याएर आफ्ना मागहरू पूरा गर भन्ने अर्थका रुपमा मात्रै यसको प्रयोग गरिएको हो । जनमत गरेर तिम्रो विखण्डनवादी मागबारे छिनोफानो गर्न तयार छौं भनेर सरकारले सहमति गरेको कुरा कपोलकल्पित कुरा हो । यो भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
० तर, सीके राउत स्वयंले आफ्ना एजेन्डामा जनमत गर्न सरकारलाई सहमत गराएँ भन्ने जिरह पेश गरेका छन् नि ?
–घोषणासभामा म पनि पुगेको थिएँ । त्यहाँ उहाँले जनमतका लागि सरकार तयार भयो भनेर बोल्नु भएको थिएन । जनतमको कुरा उहाँले गर्दा कतै सरकारले गलत सम्झौता ग¥यो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर, यसमा शंका गरिराख्नु पर्दैन ।
० तपाईंले यस्तो दाबी गरे पनि सीके राउतले विगतमा उठाएको विखण्डनवादी मुद्दाप्रति आत्मालोचित भएको र पछि हटेको त कहीँ उल्लेख नै छैन नि ?
–मञ्चबाटै उहाँले आफ्ना सबै कुराहरू छाड्दै मूलधारमा आएको भनेर बोल्नु भएको छ । सम्झौतामा संविधान मान्ने कुरा पनि गर्नु भएको छ । फेरि उनले आफ्ना एजेन्डा छाडिसकेपछि नै वार्ता र संवादहरू भएका हुन् । त्यसैले अब यो विषयमा शंका गरिराख्न म जरुरी देख्दिनँ ।
० देश विखण्डनको नारा बोकेको समूहलाई कन्भिन्स गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु आफैंमा ठूलो सफलता थियो । यति गुरुत्वको विषयलाई बुझिने प्रष्ट भाषामा लेखेको भए के बिग्रन्थ्यो ?
–सम्झौताका क्रममा सबै कुरा भनेजस्तो नभएका हुन सक्छन् । केही शब्द प्रयोगमा कमीकमजोरी भएको हुनसक्छ । तर मूलभाव बिग्रेको छैन । मुलुकको अखण्डतामा आँच आउने गरी कुनै काम गर्दिनँ भनिसकेकाले यसमा माथापच्ची गर्न जरुरी छैन ।
० पार्टीमा चाहिँ किन छलफल गर्नु भएन त ?
–मुलुक नै विखण्डन गर्नेगरी आएको एउटा संगठनसँग भइरहेको वार्ता गोप्य राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । सार्वजनिक गर्दा धेरै कुरा बिग्रने भएकाले पनि खुला छलफल गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेताकै बीचमा छलफल गरेर यो विषय निपटारा लगाइएको छ ।
० यति राम्रो सहमति गरेको दाबी गर्नुभयो । तर नेकपाकै नेताहरूले यसको किन विरोध गर्नु भएको होला ?
–मैले अघि नै भनेँ सीके राउतले विगतमा गरेका कमजोरी भयो भनेर स्वीकारी सक्नुभएको छ । संविधान मान्छु भन्नु भएको छ । यसको परिणाम हेर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर विखण्डन छाडेर उहाँबाट यस्तो प्रतिबद्धता आउनु नै ठूलो कुरा भएकाले नेता कमरेडहरूबाट विरोध आइरहनु उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० नेता भीम रावलले आफू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएको भन्दै यो सम्झौता विद्रोही संगठनसँग सरकारले गरेको भन्दा पनि दुई देशबीच गरेजस्तो भयो भन्नु भएको छ । यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?
–हरेक आन्दोलनमा सहमति भएका छन् । २०४७ मा भयो । माओवादीसँग पनि गरियो । ०६२÷६३ को आन्दोलनको निकास पनि सहमति पछि नै भएको हो । अहिले पनि सीके राउतलाई बिखण्डनको एजेन्डाबाट संविधानमा सहमत गराइएको छ । यो विषयलाई तोडमरोड गरेर हेर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० फेसबुकमा एकजना राजनीतिक विश्लेषकले लेखेका छन्– एकनाथको होलीवाइनको सांस्कृतिक आत्महत्या र सीके राउतसँगको अखण्डता अन्त्यको व्यहोराको सम्झौता । संस्कृति र भूगोल दुवैको अस्तित्व विसर्जनतर्फ । राष्ट्रवादी छविको दल र प्रधानमन्त्रीबारे लागेको यो अभियोगबारे के भन्नुहुन्छ ?
–उहाँले अब यसलाई कुन ढंगले विश्लेषण गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर, मेरो विचारमा यो राजनीतिक विश्लेषण होइन । एकनाथ ढकालको अगुवाइमा भएको कन्फरेन्स र विखण्डनकारीले संविधान मान्दै शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु भन्दै रुपान्तरणको चाहना देखाउनुको तुलना हुनै सक्दैन । म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसारका सबै देशमा विद्रोही समूहसँग सम्झौता हुन्छ । चाहे प्यालेस्टाइन र इजरायलको कुरा होस् या एसए आराफात र बेन्जामिन नेतान्याहु गरिएका वार्ताका कुरा हुन् या अफ्रिकन र युरोपी नेताहरूको कुरा हुन् । सबैले सम्झौता र सहमति गरेर विवादको ऐंजेरु हटाएका छन् ।
० बाटो बिराएका दल तथा सशस्त्र समूहलगायतलाई मूलधारमा ल्याउने वार्ता टोलीको जिम्मेवारी सरकारले तपाईंलाई दिएको छ । अन्य समूहलाई मूलधारमा ल्याउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन्, बताइदिनुहोस् न ?
–अब त अरु समूह बाँकी नै छैनन् । हिजो तराई÷मधेसमा रहेर हतियार उठाएका देखि लिम्बुवान खुम्बुवानसम्मका सबै समूह सहमतिमा आइसकेका छन् । कतिले त मूलधारको राजनीति नै थालेको अवस्था छ । केही अन्य दलमा प्रवेश गरेका छन् ।
० तपाईंहरूको प्रयासमा मूलधारमा आउने या गल्ती सच्याउने समूहको संख्या कति छ ?
–हामीले सुरुमा ४४ समूह देखेका थियौं । त्यसमध्ये १७ समूह कुनै अस्तित्वमा नरहेको देखियो भने २९ वटा समूहसँग वार्ता गरेर सहमति गरेका छौं । हतियार उठाएर हिंसात्मक गतिविधि गर्दैनौं, गरेको खण्डमा कानूनअनुसार सजाय भोग्न तयार छौं भनेर उनीहरूसँग भएको सम्झौतामा स्पष्टरुपमा नै लेखिएको छ । सीके राउत समूह अलि जटिल रुपमा देखिएको थियो । विखण्डनको माग नत्यागेसम्म वार्ता गर्न सकिन्न भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका थियौं । त्यो पनि मूलधारमा आएपछि अब त्यस्तो समस्या छैन ।
० तर, विप्लव समूह त समस्याको रुपमा आइरहेको छ नि ?
–विप्लव समूह पनि समस्याको रुपमा छ । यो राजनीतिक शक्ति भएकाले यसलाई राजनीतिक व्यवहार गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
० विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेको छ । यो समूहलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नु भएन कि के भयो ?
–अनौपचारिकरुपमा विप्लव समूहसँग वार्ता गरियो । गुणराज लोहनीलगायतसँग धेरै चरणमा अनौपचारिक छलफल पनि भए । तर, औपचारिक छलफल गर्ने वातावरण बनेन । यद्यपि, हामीले विप्लव समूहका खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, उमा भुजेललगायत नेतालाई रिहा गरेर वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । त्यही अनुरुप उहाँहरू रिहा पनि हुनुभयो । तर अन्तिममा किन हो, उहाँहरू विस्तारै टाढिनु भयो । यसको कारण हामीले थाहा पाएका छैनौं ।
० विप्लव समस्यालाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यसको समाधानको उपाय के हुन सक्ला ?
–विप्लव समूहले अतिवाद देखाउँदै आएको छ । राजनीतिक रुपमा पनि उहाँहरूले गलत बाटो प्रयोग गरिरहनु भएको छ । हतियारको बलले राजनीति गर्ने अतिवाद देखाउनु भएको छ । यो अहिलेको युगमा सुहाउने कुरा होइन । जनता हतियारको बलमा शासन सत्ता दिने पक्षमा छैनन् । उहाँहरूले अहिले लिइरहेको कोर्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसको समाधान वार्ताकै माध्यमबाट गर्नु पर्छ । हामीले सरकारलाई यही सुझाव दिएका छौं ।